Ampio fiteny maromaro amin'ny finday Android verina any Shina na mifidy tsena - Websetnet
Ampio fiteny maromaro amin'ny finday Android verina any Chine na mifantina tsena
Ireo Android smartphones mivarotra afa-tsy amin'ny tsena voafidy dia tsy tonga amin'ny fiteny rehetra. Ohatra, Nokia smartphones mivarotra any Shina dia manana fiteny 3 ihany - Anglisy, Sinoa (vitsy) ary Shinoa (nentim-paharazana). Noho izany, raha mividy (na mieritreritra ny hividy) telefaona toy izany ianao, dia ho hitantsika ny fomba hanampianareo fiteny hafa (locale). Na izany aza, mariho fa ny fampiharana stock sasany dia tsy hanova ny fiteny na dia efa nampiditra fiteny vaovao aza ianao.
Ampio fiteny amin'ny Android ny finday tsy misy Root
Mahafinaritra raha toa ka mahazo fidirana amin'ny root amin'ny Android ianao. Na dia tsy azonao aza, dia azonao ampiasaina bebe kokoa izany amin'ny alàlan'ny fahazoana alalana amin'ny ADB. Noho izany, mila mampifandray ny fitaovana amin'ny PC ianao na Mac ary mihazakazaka baiko. Ireo dingana ireo ihany dia miasa amin'ny dikan-teny rehetra vao haingana Android, anisan'izany i Nougat sy Oreo.
Hametraka ADB sy Fastboot amin'ny PC ianao. Download rohy
Ao amin'ny telefaoninao Android dia manaova pifidianana.
Open Fitaovana> System> Momba ary tadiavo ny fe-potoana 8.
Tadiavo USB debugging by going to Fikirana> System> Developer Options.
Open Play Store amin'ny findainao ary ampidiro ny app izay antsoina MoreLocale 2.
Open MoreLocale app ary mifidiana ny fiteny izay tianao hampiana. Azonao atao ihany koa ny manampy fiteny iray raha tsy misy izany lisitra izany.
Amin'ity fotoana ity dia hampiseho anao ny Tsy nahazo fahazoan-dàlana diso (screenshot etsy ambany). Tapety Asehoy ny fomba fampiasana ny PM. Ny varavarankely manaraka dia hampiseho aminao ny baikon'ny ADB.
Ampifandraiso amin'ny telefaonina ny findainao. Avy eo sokafy ny varavarana Command Prompt ary araho ity baiko manaraka ity:
Miverimberina indray ny lokanao amin'ny telefaona ary ho hitanao fa misy vokany avy hatrany. Raha mbola tsy miasa izy dia tsy voavaha ny didin'ny ADB.
Fanamarihana: Ny finday sasantsasany dia hamoy ny isam-bolana eo am-pelatanana. Amin'ny tranga toy izany dia azonao atao ny manova maharitra amin'ny alàlan'ny fampidirana fiteny iray hafa amin'ny lisitry ny fiteny ary avy eo mametraka azy ho fiteny voalohany. Amin'izao fotoana izao, mametraka indray ny fanao vaovao eo an-toerana ho toy ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alàlan'ny fitarihana azy mankany amin'ny toerana voalohany.
'Scanner QuadRooter' ho an'ny Android dia mamantatra ny fahapotehana mahakasika ny 900 Million Devices, miaraka amin'i Sams ...
Samsung dia hanamboatra ny takelaka snapdragon XMUMX Qualcomm
Eyefi Mobi dia tonga any amin'ny Windows Phone, mitondra horonan-tsary ho an'ny palma misy anao
Ny iPhone XS Max Luxury Vary Vary Anaty India, Specifications, Release
Ny fakantsarin'i OZO VR Nokia dia nahazo $ 15,000 ny vidin'ny vidiny
5 smartphone ho hitady ny voalohany amin'ny 2016
Ny mpampiasa iPhone dia afaka mametraka Fitaovana Galaxy amin'ny $ 1
Tags:Android Operating System fiteny Nokia Rooting (Android OS) finday avo lenta
Apps Ubuntu 14.04 Samsung Galaxy Plugins HTML windows update finday avo lenta Ubuntu 16 web browser Server PPA fitaovana ubuntu 15.04 OS X MySQL fitaovana One ' Phone "PC HTTP lalao Command Facebook Support GNOME Time Malagasy Bible Up " haino aman-jery sosialy CentOS 7 nbsp hametraka command line loharano misokatra famerenana Twitter SSD HTTPS raki-daza Screen PHP afa-po Users Fitaovana finday PDG tahirin-kevitra Toetoetra YouTube Debian CentOS Linux Mint Ubuntu 14.10 Linux Ubuntu Systems IP adiresy fifamoivoizana Apache Windows 10 Google Bing takelaka fikirakirana iPhone 'App lalao Chrome fanamarinana SEO toe-tsaina Linux web server Ubuntu bilaogy Video Microsoft Unix ram SSH Firefox Samsung WordPress Unité centrale bilaogy 04 app store rafitra Cortana Windows 8 fitaovana finday Android endri-javatra taona fitaovana Apple Watch Rafitra fikirakirana Nginx Windows Plugin rindrambaiko vaovao farany paoma Windows Phone Company API USB Database MAMAKA fikarohana 10 Microsoft Windows File famotsorana Performance